Mana isan’andro – Alakamisy 23 Jolay 2015 – Athis Fanantenana
Mana isan’andro – Alakamisy 23 Jolay 2015
SALAMO 46 F.1
Mandry ivohon’ny vato
Ity tononkiran’ny zanak’ Israely ity dia mamerimberina fa momba azy ireo ny Andriamaniny (7, 11). Voalaza eto koa fa monina ao Jerosalema Izy, ary tsy samontan-dranomasina misamboaravoara tahaka ny voalaza amin’ny andininy fahatelo (3) no ao fa renirano mampifaly avy amin’ny Tompo (4,5).
Ary ho an’ny firenen-kafa sy ny Malagasy ?
Tsy miankina amin’ny firazanana, fa ny olona tsirairay izay mino ny famonjen’i Jesoa dia tonga zanak’Andriamanitra (Jaona 1. 12). Ka raha zanany dia ombany sy afaka mandray ny fampanantenany rehetra.
Fahatokiana. Fahoriana (1), loza (2,3), ady (6) sy ny sisa, n’inon’inona hitranga, izay omban’ny Tompo dia arovany amin’ireny. Afaka mandamina ny zavatra rehetra araka ny sitrapony Izy ary Tompon’ny fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra (9-11).
Mifehy ny ady rehetra misy Izy (« Eternel des armées ») ary andrian’ny fiadanana.
Midika ve izany fa ny olona niharam-boina dia tsy narovan’Andriamanitra na tsy zanany ?
Tsia, raha izay no mahasoa ny zanany, dia avelany hitranga. Ao anatin’ny olana koa no mampitombo ny fiankinana amin’ny Tompo. Raha tojo izany ianao zanak’Andriamanitra dia aza matahotra fa izay mihitsy no làlana itondrany. Azo antoka fa mahasoa ny fandaharany, na tsy azonao avy hatrany aza. Aza misalasala miantso, fa vonona Izy hamonjy, hanome hery ary hanohana.
Manasa antsika ny salamo eto mba haka fotoana hitsaharana, handinihana fa Ilay Andriamanitra ivavahantsika dia Tompon’izao rehetra izao, manana ny fahefana ambony indrindra, mahery sy mahatahotra(6,8), maharo sy fialofana, azo ianteherana. Sahia koa manandratra Azy ho Andriamanitrao.
Teny mivohitra: Fahasoavana, Fiarovana
Mana isan'andro - Zoma…